Radio Don Bosco - Niala tamin-dralehilahy ny habokàna...
Ry kristianina havana ! Fantatsika tsara ny aretina habokana fa ratsy ary mamindra. Ireo olona voan’io aretina io dia atoka-monina satria toy ny maloto ka tsy tiana handoto ny olona na hamindra amin’ny hafa. Ny aretina moa ao amin’ny Baiboly dia heverina ihany koa ho toy ny fahotana ka anisan’ny hitalahoana famindram-po amin’Andriamanitra ny hahasitrana azy. Ny aretina mbola sedraintsika amin’izao fotoana izao, dia io Coronavirus io, tsy maintsy atoka-monina izay olona voany. Nanatona an’i Jesoa anefa ity boka ity nangataka ho sitraniny ka sitrana. Finoana no nanosika azy, ary finoana narahina dingana nanatona. Efa noresahantsika teto omaly ny mahakasika izay fifanatonana izay mba hahatanteraka ny famonjena antsika. Tsy afaka manatona olona hafa isika raha voan’ny aretina Covid-19, nefa tsy manakana antsika kosa izany hivavaka, hitalaho fahasitranana amin’i Jesoa ary raha manana finoana sy fahatokisana isika dia manasitrana antsika Izy.
Fandrentsika matetika ao amin’ny Evanjely koa io fandraran’i Jesoa an’ilay boka sitrana io hoe aza milazalaza na amin’iza na amin’iza. Izany ilay tsiambaratelon’ny maha Mesia Azy, izay tsy tiany aseho raha tsy tafatsangan-ko velona Izy. Izy anefa milaza hoe mandehana miseho amin’ny mpisorona ary mandidy hanolotra fanatitra ho mariky ny fahasoavana azo sady fisaorana an’Andriamanitra. Mampianatra antsika i Jesoa fa na inona na inona fahagagana sy fahasoavana entin’Andriamanitra amintsika eo amin’ny fiainana dia tokony isika hanaja mandrakariva ny fitsipika sy ny lalàna mifehy ny fiaraha-monina, na firenena, na Fiangonana. Fanajantsika izany lalàna izany ny fanolorana fanatitra andidian’i Jesoa ilay boka sitrana hatao eto. Ry kristianina hava-malala, ny Eokaristia anasan’ny Eglizy antsika mba ho vonjentsika isan’andro na farafaharatsiny isan-kerinandro dia fanehoantsika izay fankasitrahana an’Andriamanitra noho ny fahasoavana omeny antsika izay. Aza raisina amin’ny maha didin’Andriamanitra azy fotsiny io, na dia anisan’ny lalàna azy, fa raiso ho toy ny fisaorana mandrakariva avy ao am-po satria soa sesehena isan’andro no omeny antsika. Fahalalam-pomba tsara ary toetra mendrika ny fahaizana mankasitraka koa misaora an’Andriamanitra lalandava.